Otutu ihe iji zụta Vernee Mix2 | Gam akporosis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Mobiles
Taa, anyị na-ekwu maka ezigbo ama maka ndị hụrụ nnukwu ihe ngebichi. Na Ngwunye Vernee 2 nwere nnukwu Igwe ngosi isii zuru ezu na HD na mkpebi 2160 x 1080. Ihuenyo nke ga-eme gị obi ụtọ na ọdịnaya multimedia kachasị amasị gị n'ụzọ zuru ezu.
Ihuenyo di egwu nke gha enyere gi aka ihu nke oma, dee nke oma ma nwee obi uto n'egwuregwu gi karia. Nke kachasị mma, Vernne Mix 2 nwere otu nha dị ka ama nwere ihuenyo 5,5-anụ ọhịa. Na-eme ihe ka ukwuu n’ihu gị ma na-agabiga visors ahụ akụkụ jisiri ike "dabara" nnukwu ihuenyo a n'emeghị smartphone dị iche.
1 Nnukwu ihuenyo na nha nha
2 Vernee Mix 2 na elu nke ọhụụ ndị ọhụrụ
Nnukwu ihuenyo na nha nha
Su nyocha ihuenyo 18: 9 ọ dị mma maka ikiri usoro ọkacha mmasị gị ma ọ bụ ihe nkiri na-enweghị anya gị. Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu na anyị nwere ike ịnụ ụtọ ama ama na ihuenyo dị otú ahụ dabara adaba n'aka anyị. Azọ nzọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-eji mkpanaka gị na-ekiri vidiyo, foto ma ọ bụ gụọ e-akwụkwọ.
Dị ka a tụrụ anya, smartphones ọhụrụ ndị nwere enyo na-enyo enyo abanyela n'ahịa. Gbaso ụzọ nzọ nke Apple, Vernee Mix 2 nwere iko na azụ ya. Kedu nke na-enye onyonyo mara ezigbo mma, ma n'otu oge ahụ na-egosi na ọ ga-ekwe omume ịmalite mmụọ nsọ na-enweghị i copomi. Ngwakọta nke iko n'azụ na-enye ya ọkaibe mara mma.
Na Vernee Mix 2 nwere ihe karịrị pesenti iri asatọ nke ahụ ya kpuchie na iko. Ọ bụ ezie na dị ka ndị na-emepụta ya na-anaghị eme ka ọ na-amị amị ma nwee njigide dị mma. Ebe ọ bụ na anyị zutere iPhone 8 anyị chere maka ụlọ ọrụ izizi iji tinye iko n'ime igwe ha. Na Vernee jidere aha ya na ya Mix 2.
Gbaso omume nke smartphones dị ike, Vernee Mix 2 dị njikere iji soro onye ọ bụla merie. Na a 4GB Ram na 64GB nchekwa. Nke ahụ na-akpali ekele a Octa-isi Helio P25 processor nke ahụ na-enye ya ike dị mkpa. You gaghị atụ egwu maka njirita arụmọrụ ọ bụla na onye ọ bụla na-ama gị aka.
Vernee Mix 2 na elu nke ọhụụ ndị ọhụrụ
Anyị na-ahụ ka mmalite nke etiti dị ike karịa mgbe ọ bụla ọzọ. E nwere ọtụtụ smartphones ndị na-egosi n'ahịa ndị nwere atụmatụ ruo mgbe edebere maka "elu nke nso a." Na nke a na mgbakwunye na ịbụ oke akụkọ maka ndị ọrụ. Anyị na-atụ anya na ọ ga-enyere asọmpi ahụ aka ịgbaso usoro maka mmụba na uru.
N'ịga n'ihu na omume a, anyị na-ahụ otu Vernee Mix 2 nwere igwefoto igwefoto di egwu. Igwefoto nke Sony dere nke mere ka mix 2 bụrụ nke mbụ na ezinụlọ Vernee nwere ụdị igwefoto a. Anyị na-ekwu maka ese foto 15 Megapixels na 5 Megapixels, karị. Bilie site na ike Ikanam flash, nke ya na oghere uzo sara mbara Ha na-egosi anyị igwefoto nke ga-abụ ihe ịrụ ụka na-adịghị mma.
Vernee Mix 2 ga-adị na agba abụọ dị iche iche. na nwa na acha anụnụ anụnụ, ha abụọ eji enamel acha na-eme ka ama a yie ezigbo ego. Fọdụ ụda anya mara mma ma mara mma nke na-eme Vernee Mix 2, na mgbakwunye na ike, njedebe dị ezigbo mma.
Nkebi nke batrị O yikwara ka ọ ga-edozi nke ọma na uru ndị ọzọ ọ na-eweta. Na a 4200 mAh ikike nke ahụ ga - eme ka ama ama a ghara ịta ahụhụ iru ụbọchị ahụ yana ụgwọ batrị dịnụ. Tụkwasị na nke ahụ, a kwadebere ya na teknụzụ na-ebu ngwa ngwa, nke ga-eme ka obodo ya gbasaa ruo mgbe egboro mkpa anyị.
Dịka anyị pụrụ ịhụ, ekwentị nke na-enye ihe niile anyị nwere ike ịtụ anya site na ngwaọrụ nwere atụmatụ ya nwere ike iso n'etiti ndị kachasị ama n'etiti. Gịnị mezie ngwa ngwa anyị ga-enwe ike ịzụta maka ọnụahịa nke $ 169,99. Ihe ruru puku atọ dị na acha anụnụ anụnụ na nwa, dị site na Ọktọba XNUMX. Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike site na njirimara ya, ọdịdị ya na ọnụahịa ya, echefula.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Otutu ihe iji zuta Vernee Mix2
Ebe ọ bụ na anyị zutere iPhone 8 anyị chere maka ụlọ ọrụ izizi iji tinye iko n'ime igwe ha. Na Vernee na-ejide aha ya na ya Mix 2 ……
Ejiri iko mee Huawei P7 n’azụ ya.